DATURA: NOOCYADA IYO NOOCYADA CAWSKA - CAWS CIRIIRI
Datura waa mid dhirta oo keliya ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo meelaha ugu muhiimsan, sariiraha ubaxa, sariiraha ubaxa. Waxaa jira noocyo noocaas ah sida Datura caadiga, Hindiya, Meteloides, Hindiya. Dhammaantood way ku kala duwan yihiin dhererka afkoda iyo midabka burooyinkeeda. Datura waxaa loo isticmaalaa daawada. Iyada oo ku saleysan abuur ay soo saaraan daawooyinka cilminafsiga psychotropic. Waxaan soo jeedinaynaa inaan tixgelinno noocyada Datura, oo inta badan loo isticmaalo beerta.
Datur wuxuu ku koray hal abuur iyo mid kooxeed. Thanks to ay duurka xoog leh, ubaxa u muuqdaan fiican ee isku dhafan. Datka Indian ee koray dheriga waxay noqon kartaa quruxda weyn ee albaabka weyn. Kuwa ugu caansan ee bannaanka u yahay cirifka caadiga ah.
Ma taqaanaa? Xayawaanka qaarkood ma saameynayaan xayiraadda.
Datura caadiga ah: sharaxaad iyo noocyo caan ah
Datura caadiga ah waxaa sidoo kale loo yaqaan 'smelly', iyo sharaxaad ka mid ah warshadda waxaa la bilaabi karaa ubaxa. Waxay leeyihiin ur adag oo adag. Buds waa balaadhan, cad cad, korriin, qaab ah tuubo. Dhallaanku waa kacsan yihiin, oo udubdhexaad ah, ilaa 120 sentimitir. Hoos-u-dhaca oo ka soo baxa. Caleemaha waxay kudhow yihiin geeso jug leh. Heerka guluubka waa 7-10 cm. Midhaha cirifka ayaa ku wareegsan, cagaarna leh qoob ka dheer. Galka sanduuqa ku jira waa miro madow. Noocyada Datura waxay ku kala duwan yihiin burooyinkeeda midabka.
Noocyada ugu caansan ee datura caadiga ah:
Tatu - ubax lilac-buluug;
Dillaaca - noocyada kala duwan waxaa lagu kala saaraa maqnaanshaha kudka ee sanduuqyada abuurka.
Waa muhiim! Haddii aad ku sumo by datura, waa inaad isla markiiba aad u matagto matag.
Tafaasiisha iyo noocyada kala duwan ee Hindiya
Magaca warshadani wuxuu u sabab ahaa qaybinta ballaaran ee qabaa'ilka Hindida ee ku nool Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Hindisaha Hindiya waa sanadkiiba oo leh 0.7 ilaa 2.0 m. Caleemaha ubaxa waa kuwo waaweyn, ukunta-qaabeeya, ilaa 15 cm dheer, cagaar iftiin leh, xididdada oo kala duwan iyo geesaha saafiga ah. Meydhaa iyo ka tagto jimicsiga timaha. Ubaxa waa tuubo hal, oo weyn, gaaraya 20 cm oo dherer ah, dhexroorka ubaxa waa qiyaastii 10-12 cm. Ubaxku wuxuu ku yaallaa laanta asliga ah iyo kor u xajinta. Midabka ubaxa waa baraf cad oo leh koob khafiif ah. Miraha geedka ayaa wareegsan, oo la mid ah caleenta, gudaha sanduuqa abuurka waxaa ku jira midho yar oo midab huruud ah. Marka la barbardhigo urta ubaxyada leh ee ubaxa, ubaxyada, marka ay waxyeello, afkoda iyo caleemaha urta sida looska.
Ma taqaanaa? Seeds Hindisaha Hindiya waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka daawooyinka nafsaaniga ah.
Datura Blooms laba maalmood. Habeenkii, ubaxyada ubaxyada, oo ka soo baxa duufaanta aan la ilaawi karin, iyo maalinta ku xigta ubaxyada dhoobada ayaa ku engegay. Waxaa jira noocyo kala duwan oo caleenta ah. Inta badan, khatarta Hindiya waxay ku wareersan tahay Meteloides dope. Datura Indian waxaa lagu soo bandhigay noocyo kala duwan oo ah La Fleur Lilac.
Datura waxay kaloo leedahay noocyada noocyada sida Meteloides iyo Indian. Hindisaha Hindiya waa sannad. Dhirta dhirta laga bilaabo 60 illaa 120 cm Datura waxay dhejisaa dharka, hoosta qoryaha, midab madow ama midab madow. Caleemaha waa muddo dheer, ukunta-qaabeeya, iyada oo xitaa xudduudaha yar yar ee lafaha. Saxanka santuuqa oo aan sinnayn. Ubaxa xayawaanka, fiirinta, cad, jaalaha ah, guduud, lilac, midab casaan. Qoryaha Hindiya waa gaajo oo joogto ah, qiyaastii 20 cm dheer. Midhaha miraha jaallaha ah waxaa lagu diyaariyey sanduuq wareeg ah oo ah midabka cagaarka cagaarka ah.
Waa muhiim! Dhammaan qaybaha geedka ayaa aad u sun ah.
Indian Datura waxay leedahay afar ka mid ah noocyada ugu caansan beerashada. Farqiga ay ku jiraan midabka biqilka:
Muuqaalka Datura Fastuosa (ubax madow guduud);
Muuqaalka Datura Chlorantha (dhuumaha labanlaabka ah ee jaalaha ah);
Coerulea Mucjisada Datura (ubax buluug);
Muuqaalka Datura Atrocarmina.
Sidoo kale caanka ah ee bannaanka u yihiin noocyada sida:
Flore Pleno (burooyinkeeda waa casaan, terro, leh meel cad);
qabow u adkaysta datur Ballerina Yellow (buro waaweyn, laba, jaalle);
Ballerina Purple (ubaxyo yar yar oo laba jibbaar ah oo datura ah oo leh dhar cad (white bundle) oo ah geeska moobaha).
Waddanka dhulgariirka, dadka deegaanka, ogaanshaha noocyada kala duwan ee ay isticmaalaan, waxay sameeyaan tinctures kala duwan oo loogu talagalay isticmaalka dibadda, iyaga oo isticmaalaya abuurka datura iyo tubaakada, isu diyaarinta isku dhuuqda sigaarka. Tijaabinta habkan looma talineynin nafteeda, maadaama ay tahay mid aan badbaado lahayn oo caafimaadkana u noqon karta mid dhimasho ah.
Su'aasha ah in dhammaan noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'narcotic', waa mid si badbaado leh uga jawaabi karta in dhammaan xogta, iyada oo aan laga reebin, waxay leedahay saamayn hallucinogenic on jidhka bini'aadamka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Caws ciriiri 2019